ချစ်ကြည်အေး: ဘလော့ဂ်ဂါ့ယောင်္ကျား ဘဝ...
ဇွန်မိုးစက် Thu Mar 11, 09:46:00 PM GMT+8
အဟိ...ဖတ်လိုက်တာ အမောတွေပြေသွားပြီ။ ပုဇွန်တောင် အမှိုက်ပုံက အကြီးကြီးနော် အစ်မ။ အမှိုက်ပုံထက် အမှိုက်တောင်လို့ ခေါ်လို့ရလောက်အောင် ကြီးတယ်နော်။ :D
sonata-cantata Thu Mar 11, 10:07:00 PM GMT+8
ဒေါ်ချစ်ကြည် အလုံအမှိုက်ပုံက မရှိတော့တာ ကြာပေါ့... အိမ်ယာတွေ ဖြစ်နေပြီ... ဘာဖြစ်ဖြစ် အမှိုက်ပုံထဲ တကုတ်ကုတ် စာရေးစာဖတ်နေတဲ့ ပုံကို မြင်ယောင်ရင်း ဟီးဟီး သနားတယ်း)
Anonymous Thu Mar 11, 10:32:00 PM GMT+8
ခစ်ခစ်ခစ် ခြောက်စက်ထဲက ဟာတွေ ထုတ်ရသေးဘူး ဒါ့ကြောင့် အ၀တ်ထုတ် ရှိဟူး။
မေဇင် Thu Mar 11, 10:37:00 PM GMT+8
;) ရေးထားတာလေး ရီရတယ်....။
သက်ဝေ Thu Mar 11, 10:48:00 PM GMT+8
မြင်ရတာ ဆိုးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် guilty ဖြစ်စေလို့... အဟဲ...
အဖုံးပါတဲ့ ပလတ်စတစ်ခြင်း အကြီးကြီးနဲ့ထည့်ပြီး ပိတ်ထားလိုက်တယ်... မှတ်ကရော... (အတုယူပါ သူငယ်ချင်း...)
SHWE ZIN U Thu Mar 11, 11:42:00 PM GMT+8
သူငယ်ချင်း ရေ အမှိုက်ပုံထဲ ထိုင်ပြီး ဘလော့ရေးနေတဲ့ ပုံကို မြင်ယောင်ရင်း ရီမိပါတယ်
Nature Active Fri Mar 12, 01:25:00 AM GMT+8
ကျမ အမှိုက်ပုံထဲကနေ လာဖတ်သွားပါတယ်...
လျှော်စရာအ၀တ်တွေကို အ၀တ်လျှော်စက်ထဲ ထည့်ပြီး အဖုံးပိတ်ထားတက်သူမို့ .... :)
ဝက်ဝံလေး Fri Mar 12, 02:06:00 AM GMT+8
အဲဒါ ဘလော့ဂ်ဂါပဲ လေ မမရဲ့ ဟိ အော် ဘွ ဘွ ဘွ ဘလော့ဂ်ဂါ ဘွ မလွယ်ပါ့လားနော် ဖူးးးးးးးး ဟိဟိ
မောင်မောင် Fri Mar 12, 03:15:00 AM GMT+8
မချစ်ကြည်အေး နာမယ် တစ်ခုကျန်နေသေးတယ်ခင်ဗျ။
အလုံ က တော့ အခု နှောင်းလူတွေသိတော့ဘူး။
( အဟဲ စတာနော် :)
Nge Naing Fri Mar 12, 05:54:00 AM GMT+8
မချစ်ကြည်အေးရေ ဘ၀တူပဲ။ ကျွန်မကတော့ အမြင်မတော်ရင် ကိုယ့်ဖါသာကိုယ် ရှင်းလိုက်ပါလား ခြေတွေလက်တွေ မရှိရာကျနေတာပဲလုိ့ ပြောပြီး ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာကိုပဲ ဆက်လုပ်နေတာပဲ။ ကျွန်မက မီးပူတိုက်ရတဲ့ အ၀တ်ကို ဘယ်တော့မှ ၀ယ်မ၀တ်သလို သူ့ကိုလည်း မ၀ယ်ပေးဘူး။
ကိုဇော် Fri Mar 12, 06:06:00 AM GMT+8
( အနော့်ဟာပါ လျှော်ပေး........ဂလိုလေ )
ဒီလိုလေး နာမည်ပြောင်းလေး အမရာ..
သာကေတ ၊ ပုစွန်တောင် ၊ အလုံတွေ ဆိုရင် လူတွေက ဘယ်သိပါ့မလဲဗျ..
ဒါကြောင့်. . .ချစ်ကြည်အေး ( အမှိုက်ပုံ ) ဆိုရင် ပြီးရောပေါ့။
( ကျနော့်ဘေးမှာ ကျတော့ အအေးဗူးခွံတွေ ဝိုင်းနေတယ်ဂျ..)
အပြုံးပန်း Fri Mar 12, 06:23:00 AM GMT+8
မီးပူတိုက်တဲ့ အိန်ဂျယ်လေးရှိရင် ကောင်းမယ်နော်။
Anonymous Fri Mar 12, 07:09:00 AM GMT+8
အင်ကြင်းသန့် Fri Mar 12, 07:49:00 AM GMT+8
မမ...ဘာမှ ဆင်ခြေတွေမပေးပါနဲ့ မမလက်ရာကို စားဖို့ ဦးထားပြီးသားနော်...ဟွန်း... :)))
sosegado Fri Mar 12, 09:21:00 AM GMT+8
ဘာတွေ အိမ်မက် မက်ခဲ့သလဲ၊
မန်မိုရီ ကို ပြန်ခေါ် တဲ့စက်ပါ၊
နားထင်နှင့် ခေါင်းပေါ်မှာ ဝါယာကြိုး စတစ်ကာလေးတွေ ကပ်ပြီး
စက်ဖွင့် ရီကော ခလုတ်နိပ်၊ ဘယ်အချိန်ကဟာ ပြန်ခေါ်ချင်သလဲရွေး၊
ရီကောပြီးသွားရင် အသံပေးပါတယ်၊ လူကြီးမင်းရဲ့ရီကောပြီးဆုံးသွားပဲပြီ ရဗြုး လုပ်လို့ ရပါပြီ၊
ရဗြုး ခလုတ်နိပ်လိုက်ရင်၊ အကုန်ပြန်ပေါ်လာပါတယ်၊
လိုအပ်ရင် ပရင့်အောက်ထုတ်လို့ ရပါတယ်၊
အဲဒါဆို ညည ထရေး ထမှတ်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။
Thant Fri Mar 12, 09:26:00 AM GMT+8
ဟားဟားဟား....comment တွေပါဖတ်ပြီးရယ်သွားတယ်...အစ်မသက်ဝေအကြံမိုက်တယ်.... :D
~ဏီလင်းညို~ Fri Mar 12, 09:30:00 AM GMT+8
ကိုချစ်ဖေ Fri Mar 12, 02:10:00 PM GMT+8
ဆက်သာရေး..မချစ်ကြည် တရေးနိူးလဲရေး မနက်ည ရေးသာရေး အားပေးတယ် အမျိူးသားက မချစ်ကြည်ကို ချစ်ကြောင်း အမှိုက်ပုံထဲကနေ
Vista Fri Mar 12, 03:23:00 PM GMT+8
အနော်ကတော့ ချိတ်တွေအများကြီးရယ် တန်းကြီးကြီးရယ်ထားတယ်။ခြောက်တဲ့အဝတ်တွေကို ချိတ်နဲ့ ချိတ် တန်းမှာထားလိုက်တယ် ။
ပြီးမှ စတင်းမ် မာလေးနဲ့ တစ်နေ့ နည်းနည်းဆွဲတာ ဟိဟိဟိ။
Anonymous Fri Mar 12, 07:50:00 PM GMT+8
အကြံကောင်းပေးမယ် မီးပူအတိုက်လွတ်သော အင်ကျီကို ရှာဝတ်ပါလေ ကျွန်တော်တို့ဆို အဲဒီလိုဘဲ အမြဲရွေးဝတ်သည်။
အမှိုက်ပုံထဲ ခေါင်းထိုးနေတာ ကြာလှပေါ့ တော်ကြာ အမြင်မတော်လို့ စည်ပင်က ဒဏ်ပေးခံနေရအုံးမယ်
မြစ်ကျိုးအင်း Fri Mar 12, 09:22:00 PM GMT+8
လာလည်တဲ့သူလည်း ဘလောဂ်ရေးတဲ့သူဆိုရင် ဘယ်နဲ့ လုပ်မတုန်း ။ အမပြောတဲ့ အမှိုက်ပုံတွေပါ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်ခံနေရအုံးမယ်။
ပုံရိပ် Sat Mar 13, 01:42:00 PM GMT+8
အဟက်... ပုံရိပ်တို့လည်း အတူတူပဲ။ အမှိုက်ပုံထဲနေပြီး စာရေးတာ။ နာမည်မှာ ကတည်းက ပုံ ပါပြီးသား။
မြသွေးနီ Sat Mar 13, 02:23:00 PM GMT+8
ဒါမျိုးကြီးတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ် အစ်မရေ..။
မယ်ကိုး Sat Mar 13, 10:29:00 PM GMT+8
မမ စာဖတ်ရင် အမြဲ ပြုံးရွှင်ရလို့ ကျေးဇူးပါ =)
Kay Sun Mar 14, 12:05:00 AM GMT+8
မမချစ်.. စင်ကာပူ လောင်ဒရီ... ချက်ချင်းမရ.. တပတ်မှ..တလခန့်ကြမည်..
အခြောက်လျှော်..အစိုလျှော်.. အစွန်းထင်း.. ဆပ်ပြာမစင်.. မီးပူ..ကိုယ့်ဖာကိုယ် တိုက်ရန်..
လို့ ( ရွှေမြန်မာ ) မှာ ဖြစ်ဖြစ် ကြော်ငြာလိုက်လေ..း)
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Sun Mar 14, 07:59:00 AM GMT+8
ဒါလေးများ...re cycle ပုံလေးကပ်ထားလိုက်..
သူ့ဟာသူ re cycle လုပ်ပြီးယူသွားလိမ့်မယ်
khin oo may Sun Mar 14, 12:02:00 PM GMT+8
ချစ်ကြည်အေး (ဒလ)ဆိုရင်ပိုကေင်းတယ် ယောက်ျာားက စ်ိတ်ကုန်ပြီးလွတ်ပစ်လိုက်လို့ ရောက်သွားရရှာတဲ့ နေရာလေးပေါ့ ။
တို့လဲ လျော်လိုက် မီးပူတိုက်မလို့ပုံထားလိုက် ဖုန်ပြန်တက်သွားလိုက်ပြန်လျော်လိုက် ငှင်းငှင်း..
အဲသလိုမျိုးမီးသာဖွင့်လိုက်ရင်တော့အသတ်ခံရမှာသေချာတယ် ဒါကြောင့်အိပ်ခန်းထဲကို မိုးလင်းတဲ့အထိမဝင်ဘူး။ အပြင်မှာဘဲတွေးနေတယ်။
Anonymous Sun Mar 14, 12:06:00 PM GMT+8
မိန်းမရပြီးကတည်းက မီးပူတိုက်တဲ့ အ၀တ်ကို မ၀တ်ရတော့ဘူး။ လူပျိုတုန်းကတော့ ဟုတ်..ဟုတ်. မဟုတ်ဟုတ် ကိုယ့်ဟာနဲ့ကို မီးပူတိုက်ဖြစ်သေးတယ်။ အော်...အိုင်တီခေတ်မှာ မိန်းမရတာ မနိပ်လိုက်တာ။
Sint Mon Mar 15, 06:44:00 AM GMT+8
It made me smile. Thanks!
nu-san Wed Mar 31, 04:40:00 PM GMT+8
အမရေးထားတာ ဖတ်ပြီး ရီလိုက်ရတာ..ကျနော့်ဘေးက အထုပ်ကိုတောင် မျက်စေ့ရောက်သွားသေးတယ်.. မီးပူတိုက်တာ အချိန်တော်တော်ပေးရတယ်.. မတိုက်ဖြစ်တဲ့အခါကျရင် အမပြောသလိုပဲ ပုဆိုးထဲထည့်ပြီး ထုပ်ထားတတ်လို့ အထုပ်တွေဆိုတာ ဘေးမှာ ပတ်လည်ဝိုင်းနေတယ်.. ဗုံတီးလို့ရတယ်.. အခုကတော့ ဆင်ခြေပေးလို့ကောင်းတယ်လေ.. ကလေးတဖက်နဲ့ပေါ့..ကလေးကမအိပ်လို့ မလုပ်ဖြစ်တာဆိုပြီး.. အဟီး.. အခုလည်း ကလေးက အိပ်နေတာ ကိုယ်က ဘလော့ခ်လည်နေတာ.. သူကတော့ ရုံးမှာပေါ့.. :D